Home Wararka Farmaajo oo qaladkii labaad ee ugu weynaa galay kaasoo uu ku bixi...
Farmaajo oo qaladkii labaad ee ugu weynaa galay kaasoo uu ku bixi doono
Go’aankii ay maanta gaareen Farmaajo iyo kooxdiisa oo ahayd in ay qabtaan doorasho gaar ah oo ay u qabtaan dowlad goboleedyada isaga saaxiibka la ah, ayaa noqon doonta go’aankii ugu xumaa ee uu gaaaro intii uu dalka madaxweynaha ka ahaa.
Go’aan-kaan ayaa waxa uu soo afjarayaa rajadii uu Farmaajo ka qabay in dib loo soo doorto, waxa uuna xaqiijin doonaa in Soomaaliya ayan markale ku aamini doonin hogaanka dalka Soomaaliya beesha Mariixaan. Marnaba suuragal ma noqo doonto in dalka ay doorasho boob ah oo ayan u dhameeyn Soomaali oo dhan ay ka dhacdo.
Go’aankaan qalad ah waxa ka horeeyay kii uu ku magacaabay gudiga doorashada ee aan loo dhameeynin. Go’aankaas ayaa waxa uu keenay in Farmaajo uu lumiyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo kan dowlad goboleedyada, isaga oo ay isla markaasna ka soo xirantay fursadii uu dib uga noqon lahaa go’aankaas qaldan.
Waxaan shaki ku jirin in Maxamed Cabdullahi Farmaajo waqtigii uu Soomaali madaxweyne ka sii ahaa ay uga hartay wax ka yar 28 cesho. Waxaana dadka u guurgala siyaasadda Soomaaliya ay rumeysan yihiin in Farmaajo xoog looga saari doono Xarunta Villa Soomaaliya.